देश तत्कालीन माओबादी र प्रचण्ड कै म्यान्डेडमा हिडेको छ! हेर्नुहोस यो तथ्य सहित को खुलासा::Nepal's Online News Portal
देश तत्कालीन माओबादी र प्रचण्ड कै म्यान्डेडमा हिडेको छ! हेर्नुहोस यो तथ्य सहित को खुलासा
मान्छे यहाँ प्रचण्ड सगै माओबादी को आकार र संख्यात्मक शक्ति नापन लागिरहे प्रचण्ड चाही आफ्ना उद्देश्य पूरा तथा आफ्ना योजना लाई कार्यान्वयन गर्न लागे। मैले १२ बर्षे युध्द मा प्रचण्ड भेटिन तर मैले तत्कालीन कमाण्डर देबेन्द्र पौडेल को हात बाट प्रचण्ड ले हस्ताक्षर गरेको 2056 साल मा एक पर्चा लिएको थिए।
१.कथित हिन्दू धर्म को नाम मा पुस्तौ र सताब्दि को जरा गाडेर बसेको राजसंस्था लाई ढाड मा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति अख्तियार गरिएको छ।
२.जनता लाई प्रजातन्त्र को नाम मा मौलिख हक अधिकार नै कुण्ठित गरि दलित ऊंचनीच भन्ने भेदभाब र सबदावली लाई हटाइने छ।
३.राज्य संघीयता मा जाने छ जसको कार्यान्वयन को लागि जनमत संग्रह आम चुनाब या संविधानसभा को चुनाब गराई उच्च राजनीतिक दल को हैसियत बनाइने छ।
४. प्रजातंत्र मा बिस्वास गर्ने कांग्रेस को नेतृत्व तथा कांग्रेस ले नै आधार बनाएर चलाएको माले एमाले कथित कम्युनिस्ट लाई ब्यालेट अन्तर्गत पराजित गरि नया जागरण ल्याइने छः।
योसबै आफ्नो आकार प्रकार बदलिएर र अरुलाई बदलाएर पनी पुराभए। अब आर्थिक क्रान्ति को अभिभारा बाकी छ। टाउको को मूल्य तोकेर सिध्याउन खोज्ने कांग्रेस लाई प्यारलाइसिस बनाइएको छ। भाई भएर पनी पारिवारिक घेरा भन्दा बाहिर गएको एमाले लाई पनी घर फर्काइएको छ। धरातल मा मान्छे ले जे भनोस केहि फ़रक पर्दैन मैले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता पश्चात चुनाब हुदै गर्दा गरिएको घोषणा पत्र भुलेको छैन।
2060 साल भन्दा अघि आफ्नो घोषणा पत्रमा श्री5सहित को राजा राख्ने दल को बिधान नै चेन्ज गर्ने मास्टर माइन्ड बाबुराम भट्टराई लाई 40 बुंदे माग पत्र को स्मरण गर्दछु। तथा जितेर हारेर टुटेर फुटेर पनी आफ्नो अडान पूरा गरि छाडने एक सताब्दि का युग नेता प्रचण्ड लाई यो बिशाल मिसन र संघीय नेपाल को अभियन्ता को रुपमा धन्यबाद।
(प्रस्तुत लेख लाई डायमण्ड अधिकारी “बिरोधी” को फेसबुक वाल बाट लिइएको हो। यो लेखक को नितान्त निजी बिचार हो।)